Nhazi okporo ụzọ ezubere iche | Okporo ụzọ ka Mgbakwunye
Spin Rewriter - Onye edemede edemede na ENL Semantic Spinning - nke ndị 181,394 + hụrụ n'anya
Ikpe 5 n'efu
Ntughari na-eweputa ezigbo ogo mmadu.
by Beverly Obere on Nwere ike 10, 2021 Ahapụ a Comment
Nhazi n'efu Okporo ụzọ echepụtara
Uru nke web zubere website okporo ụzọ enweghị ike ịha ka nke okporo ụzọ ekele. Ndị ọbịa a na -eduzi ngwa ngwa na webụsaịtị webụsaịtị ụfọdụ, ọbụlagodi n'efu n'efu, ma ọ bụrụ na amachaghị ihe saịtị ahụ gbasara, ọ ga -abụ na ha ga -ahapụ ibe weebụ gị ngwa ngwa ka ha siri rute na ha.
09/23/2021 02:30 elekere GMT
Ee, web bụ ohere dị otu ahụ maka ohere dị egwu nke na enwere ike ịnweta ma ịchọrọ ịzụ ahịa. Nke a anaghị abịa n’etinyeghị mgbalị site n’ọgwụgwụ gị. Ndị a bụ ụfọdụ ntụnye iji wulite okporo ụzọ ezubere iche n'efu.
Saịtị blọgụ. Nke a ekwesịghị ịbụrịrị nnukwu esiri gị ike ma ọ bụrụ na ịnwee ịnụ ọkụ n'obi maka idepụta ma chekwaa ịkekọrịta echiche gị na weebụsaịtị. Blog saịtị bụ n'etiti ndị kasị oru oma ụzọ iji nweta "n'ezie" ezubere iche okporo ụzọ.
Nnwere onwe iji kpughee ozi gị site na ntinye ederede na-enye gị ohere ịdekọ nlebara anya nke ndị na-agụ ya site na ike ịkebe ya yana ụfọdụ onyonyo na-akpali akpali nke ga-eme ka ọdịmma gị dịrị. Mgbe ị na-edekọta saịtị blọọgụ, ị nwere ihe ọzọ iji dozie saịtị gị na ndị na - agụ akwụkwọ gị (o siri ike ịmebe ya) ma ọ bụ mee ya n'ụzọ aghụghọ, usoro ndị na - apụtachaghị.
Nwere ike bipụtara mgbasa ozi na saịtị blọgụ gị, fanye njikọ na ụfọdụ okwu dị oke mkpa nke niile ga-eduga okporo ụzọ ezubere iche na weebụsaịtị gị mgbe ịpịrị. Enwere ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ na ịntanetị ị nwere ike pịa ihe niile n'efu.
Nke a bụkwa ụzọ ọzọ ị ga-esi enweta okporo ụzọ ezubere iche n'akwụghị ụgwọ. Enwere ike inwe ọnọdụ mgbe ị nwere ike ịkọwa saịtị gị dịka akụkụ nke nzaghachi gị, ma ọ bụ ị nwere ike ịchọ iji usoro iji tinye ya dịka akụkụ nke nzaghachi mbụ gị.
Dịka, nke a bụ usoro kachasị dị mma iji gosipụta weebụsaịtị gị maka enwere ike ịchekwa okporo ụzọ ezubere iche n'efu, gụnye ngalaba nke weebụsaịtị gị na ngọngọ mbinye aka gị. Ekwela obi ụtọ nanị itinye aha gị ná ngwụsị nke nzaghachi gị. Debe ngalaba gị na URL gị ka ndị na-agụ akwụkwọ (ndị nwere mmasị na isiokwu ntanetị n'ịntanetị, nke bụ ọdịdị nke saịtị gị) nwere nhọrọ nke ịpị ha ma si otú ahụ bụrụ akụkụ nke okporo ụzọ gị ezubere iche n'efu.
Are na-N'otu aka ahụ kpam kpam free chọọ weebụ maka njikọ mgbanwe na-anabata gị na ebe nrụọrụ weebụ na weebụ na metụtara ma ọ bụ yiri ahịa dị ka gị. Gbalia ịnye ozi njikọ njikọ doro anya (aha na-akpali akpali, nkọwa doro anya na URL zuru oke) iji dọpụta okporo ụzọ ezubere iche site na saịtị nke ndị ọbịa nwere ike nwee nnukwu mmasị na ihe nrụọrụ weebụ gị.
Ọnụ ahịa nke mkpokọta weebụsaịtị na-ezubere iche agaghị enwe ike ịdị ka nke nke okporo ụzọ anaghị akwụ ụgwọ kpamkpam. Ee, web bụ ohere dị otu ahụ maka ohere dị egwu na ọbụlagodi okporo ụzọ ezubere iche kpamkpam enwere ike ịnweta. Nọmalị, na nke a bụ ihe kasị mma usoro iji gosipụta gị na ebe nrụọrụ weebụ nke na-ekwe omume nke na-kpam kpam free ezubere iche okporo ụzọ, na-agụnye gị na ebe nrụọrụ weebụ na ngalaba aha na gị mbinye aka ngọngọ. Debe aha ngalaba gị na URL gị ka ndị na - agụ akwụkwọ (ndị nwere mmasị na isiokwu ntanetị n'ịntanetị, nke metụtara ọdịdị nke saịtị gị) nwere nhọrọ nke ịpị ha ma maka nke a, ọ ga - abụ akụkụ nke ezubere iche gị kpamkpam okporo ụzọ.
Gbalịa inye ozi njikọ njikọ doro anya (aha na-akpali akpali, nkọwa doro anya, na URL ziri ezi) iji dọpụta okporo ụzọ ezubere iche site na saịtị nke ndị ọbịa nwere ike nwee nnukwu mmasị na ihe nrụọrụ weebụ gị.